Maitiro ekugadzirisa iyo bhatiri re iPhone kuti rigare kwenguva refu | IPhone nhau
Chengetedza iPhone Bhatiri
Iwe unoziva calibrate iPhone bhatiri? Bhatiri remidziyo richiri nhasi huipi hwesimba remafoni pamwe nevamwe iPhone inobondera. Neye ese tekinoroji yafambira mberi, mafoni edu anoenderera mberi nekubatanidza bhatiri risingatore zuva, kunyangwe nenyaya yekuti munguva dzichangopfuura manejimendi manejimendi mune echizvino mashandiro esisitimu akavandudza zvakanyanya. Kufambira mberi kwatinowana mumunda wemabhatiri emidziyo mbozha zvine chekuita nekuchaja bhatiri. Vagadziri vanoedza kubvumira zvishandiso zvedu kubhadharisa nekukurumidza sezvazvinogona mune ipfupi nguva.
Mwedzi mishoma yapfuura, Xiaomi akaunza bhatiri iro pamwe chete nechaja yakakosha, inobvumidzwa kubhadharisa 80% yebhatiri kugona mumaminetsi gumi chete. Samsung yechikamu chayo iri kushanda pamabhatiri anochinja-chinja ayo angave anobatsira mune ramangwana zvirongwa zvine mupfungwa zvine chekuita nemidziyo inoshanduka. Asi hapana chinoenderana nehupenyu hwebhatiri uye kuwedzera kwayo.
Kana zvasvika pakuchinjisa iPhone yedu, iyo yekutanga 80% yebhatiri inobhadhariswa nekukurumidza kuti itipe mukana wekuishandisa nekukurumidza. Kune rimwe divi, kana ichidarika 80%, inononoka kudzora bhatiri kuichengetedza uye nekudaro inowedzera hupenyu hwebhatiri. Kana bhatiri redu rasvika pane imwe nhanho, pakati pe700 ne1000, tinofanirwa kutanga tafunga nezvekugadzirisa bhatiri re iPhone kakawanda kupfuura zvakajairwa kuitira kuwedzera hupenyu hwebhatiri uye kuitira kuti kushandiswa kwebhatiri nehurongwa hwekushandisa hunyatso .
Zviratidzo zvekutanga zvinoratidzwa apo mudziyo wedu unotanga kudzima kana uchine bhatiri, zvichibva paperesenti yakaratidzwa kumusoro. Ndipo patinofanirwa kuenderera mberi tichigadzirisa kuitira kuti mudziyo uzive zvechokwadi kana bhatiri raichachajwa uye kana riine 1% rasara, kudzivirira kuti ridzime nguva isati yakwana.
Sezvo isu tichigona kuverenga pawebhusaiti yeApple, yega yega yekuchaja kutenderera, yuniti yechiyero chemabhatiri haisi inomiririra kuzere kwe100% yebhatiri asi zvakapesana chaizvo. Nguva dzese dzatinoburitsa bhatiri rechishandiso chedu, kutenderera kunopera. Kana tikashandisa 75% yebhatiri redu rimwe zuva uye tochaja chishandiso zuva rinotevera, hatina kupedzisa kutenderera asi 75% chete. Kana zuva rinotevera tikashandisa 25% yebhatiri, isu tinenge tapedza yakakwana bhatiri kutenderera.
Kana yako iPhone ichida kutsiva bhatiri uye kuenzanisa haina kukwana, unogona tora bhatiri rako kutsiva kubva iyi link.
Kuti tigone kuenzanisa bhatiri reiyo iPhone isu tinofanirwa kuzviita zviri nani mukupera kwesvondo kwatisingafanirwe kuronga kubuda, nekuti zvinoda nhanho shoma dziri nyore dzinotitorera maawa akati wandei. Kana bvisa iyo SIM kadhi uye uishandise mune chimwe chishandiso bhatiri re iPhone yedu richienzanisa nenzira kwayo.
1 Maitiro ekugadzirisa sei bhatiri re iPhone
2 Matipi ekudzora iPhone bhatiri kunwa
2.1 Wi-Fi, Bluetooth uye kubatana kwenzvimbo
2.2 Nongedzo yekumashure
2.4 Tsamba tsamba
2.5 Shandisa zvisina kufanira charger
2.6 Usavhara maapp
2.7 Ngwarira netembiricha
Maitiro ekugadzirisa sei bhatiri re iPhone
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kuchaja bhatiri remudziyo wedu ku100%.
Kamwe 100% yakapomerwa tinoibvisa kubva mundiro uye toshandisa zvakajairika chishandiso. Kana tichida kushandisa bhatiri tichitamba kana kuona mabhaisikopo zvakangofanana, chakakosha ndechekuti iyo iPhone inodurura bhatiri.
Kana bhatiri iri kupera, ndokuti, rinosvika 1%, tinoramba tichishandisa nharembozha nguva dzose kusvika pakupedzisira dzima.
Kana tangoenda, tinoisiya yakadaro pasina kuibatanidza kune network kuti iibhadhare. Zvakakosha kusiya mudziyo zvachose pasina bhatiri pakati pemaawa matanhatu kusvika masere.
Kana nguva yakatarwa yapfuura, pakati pemaawa matanhatu neasere, isu tichaenderera mberi nekubatanidza charger ku iPhone yedu zvakare kuti itange kubhadharisa. Nguva ino tinofanira chengeta ndiro iri yakabatana kwemaawa matanhatu kusvika masere, kuti mudziyo uwane chiyero chechokwadi chemamiriro ebhatiri.
Izvo zvakakosha kuti panguva yese iyi maitiro, ngatirege kubata mudziyo zvachose, saka sarudzo yakanakisa ndeyekuisiya muAirplane modhi, kuti tirege kuyedzwa kupindura kufona kana WhatsApp.
Kamwe kana maawa matanhatu kana masere apfuura, isu tichaenderera mberi patsanura mudziyo kubva kunetiweki uye restart nayo. Kuti titangezve chishandiso isu tichafanirwa kumanikidza nekubata Kurara uye Kutanga bhatani pamwe chete kwemasekondi mashoma kusvikira logo yeapuro yaonekwa.
Kana zvese izvi zvapera, mashandiro ebhatiri rechishandiso chedu rinofanira kuvandudza zvakanyanya kana zvichienzaniswa nemabatiro aro parizvino, zvinotora nguva yakareba kuti ibve kubva pa100% kusvika 99% uye 1% kusvikira bhatiri yadzimwa zvachose. Kubva panguva ino, iri dambudziko software, yedu iPhone inozonyatso ziva mamiriro ebhatiri.
Kana, kune rumwe rutivi, bhatiri remudziyo wedu richienderera mberi richitipa matambudziko nekureba kana kuti rinodzima kamwe kamwe kana richiri kuratidza kuti rine bhatiri rakakwana, sarudzo yakanakisa ichave ye enda kuburikidza nehunyanzvi sevhisi Apple kuti ichinje bhatiri kune yepamutemo imwe.
Tinogona zvakare kuenda kune imwe yeakasiyana unofficial masevhisi ekuchinja bhatiri asi haina kukurudzirwa. Kufanana neasina kufanira ehunyanzvi masevhisi anotibvumidza kutsiva iyo skrini ye iPhone yedu, izvo zvikamu zveaya masevhisi hazvisi izvo zvekutanga, saka mashandiro avo anogona kusiya zvakanyanya kudikanwa. Pane dzimwe nguva pazvinenge zvichikosha kuchinja skrini uye bhatiri zvakananga muApple kunyangwe zvichidhura zvishoma, pane kuyedza kutichengetera imwe mari uye pakupedzisira tinofanirwa kushanyira Chitoro cheApple kugadzirisa dambudziko.
Mutengo wekuchinja bhatiri reiyo chero iPhone modhi zvakananga muApple Chitoro iri makumi manomwe neshanu euros. Muzvitoro zvakasiyana zvinotipa shanduko bhatiri tisingave yepamutemo Apple technical technical service, iyo joke inogona kutitorera pakati pe79 ne40 euros. Izvo chaizvo hazvina kukoshesa uye nekuwedzera kuziva njodzi yatinomhanya tichiziva kuti haisi yekutanga Apple bhatiri.
Matipi ekudzora iPhone bhatiri kunwa
Wi-Fi, Bluetooth uye kubatana kwenzvimbo
Mune mavhezheni ekutanga eIOS, isu taigara tichifanira kuziva nezvekumisa kubatana kweBluetooth, iyo Wi-Fi pamwe nekubatana kwedata kana tichida kukwanisa kupedza zuva nebhatiri, asi kwechinguva ikozvino, nekuvandudza kwe iOS 9 mubhatiri manejimendi, kuremadza kubatana uku hakumiriri kuwedzera kwakanyanya mukati menguva yechigadzirwa chedu, saka hazvidiwe kuti uzviite zvinoramba zvichingoitika. Uye zvakare, mamodheru achangoburwa atoshandisa vhezheni 4.0 yeBluetooth iyo inoshandisa bhatiri shoma uye inokwanisa kutsigira chakabatana mudziyo pasina matambudziko zuva rese, senge Apple Watch.
Izvo zvinoitika pamwe nenzvimbo yechigadzirwa. Kunze kwekunge isu tiri kushandisa application iyo inoda kuenderera kushandiswa kwenzvimbo, zvese zvinoshandiswa ivo vanongoishandisa chete pazvinenge zvichidikanwa, pasina kufungidzira kwakanyanya bhatiri kunwa.
Rimwe remabasa nyowani anogona kukanganisa hupenyu hwebhatiri, zvinoenderana nenhamba yezvishandiso zvatakaisa, ndizvo zvinoshandiswa kumashure, saka iyi sarudzo inogara ichikurudzirwa kuti ihureSezvo ichitsvaga kuvandudzwa nyowani, zvinobva zvango tanga kurodha pasi chero bedzi iri pa Wi-Fi kubatana.
Nharembozha ndeimwe yemari huru inoshandiswa muhupenyu hwezuva nezuva hwechigadzirwa chedu. Ramba uchifunga kuti yedu iPhone iri kuramba ichitsvaga antenna yekubatanidza kune uye kushandiswa kwedata kune zvakakanganisa bhatiri. Iwe unongo fanirwa kuita bvunzo nefoni yako uye kudzima iyo data kwezuva zvichienderana chete neiyo Wi-Fi yekubatanidza yakakukomberedza. Iwe uchaona kuti zvinoenderana nekushandisa kwaunoita kwayo, bhatiri remuchina wako rinogona kugara mazuva mashoma pasina matambudziko.
Tsamba dzemapepa dzinowanzo kuvewo chikamu chakakosha chekushandisa kwechigadzirwa chedu, saka pese pazvinogoneka zvinokurudzirwa dzinga kusundira notices pamusoro pekuisa iyo yakanyanya kuwanda nzvimbo yekutarisa nguva munguva inogoneka.
Shandisa zvisina kufanira charger
Mune chero chitoro chemakomputa tinogona kuwana charger inoenderana neyedu iPhone, yeiyo rekodhi handisi kutaura nezve kutevedzera kweChinese. Zviripachena Apple inofarira kuti iwe upedze makumi matatu euros pajaja yepamutemo asi basa racho rinoitwa nenzira imwecheteyo. Kunyangwe majaja asina amperage yakafanana, nhare mbozha ndicho chinhu chekuita. akangwara zvakakwana kuti uzive kuti ndeipi simba rakawanda raanogona kutsigira kudzora mashandisiro ako uye kudzikisira njodzi kune zero
Zvisinei nekutenda kwakakurumbira kwekuti kuvhara mashandiro kumashure kunotibvumidza kusunungura ndangariro uye kuita kuti chishandiso chishande zvakanyanya, yave nguva yakareba kubvira izvo zvakaratidzwa kuva zvenhema. Kana mudziyo wedu ukachengeta mashandiro akavhurika, imhaka yekuti inoziva kuti munguva pfupi inotevera tichazoshandisa, zvikasadaro, patinenge tichivashandisa kwechinguva, sisitimu yacho inozvivhara. Kana tikazvipira pakuvhara mafomu kumashure, sisitimu inozoavhura zvekare nekutakura bhatiri kunotevera izvo zvinoreva, kudzikisira hupenyu hwebhatiri redu.
Kamwe kamwe kuchinja kwetembiricha, inogona kukanganisa mashandiro echigadzirwa chedu, nekuti zvinokanganisa bhatiri zvakafanana. Semutemo wakajairika, tinogara tichishandisa yedu iPhone patembiricha inokurudzirwa nemugadziri, asi dzimwe nguva, kunyanya muzhizha, tinofanirwa kungwarira kushandisa chishandiso zvakananga muzuva. Izvo zvinoitika kana tikashandisa chishandiso mune tembiricha-yepasi-zero, kunyanya munguva yechando, kwenguva refu yenguva.
Kungoerekana kwachinja tembiricha, kubva munzira kusvika pakuzara uri wega kana madhigirii akati wandei pazasi pe zero, kwatinowana mukati mekamuri kunogona kukanganisa uye nekukuvadza bhatiri redu. Neraki iPhone yedu ine yekuchengetedza michina iyo inodzima chishandiso kana ivo vari mune tembiricha isingabvumirwe nemugadziri, kuchengetedza zvemukati zvemukati zvakafanana pamwe nebhatiri.
Iye zvino zvawave kuziva kuenzanisa bhatiri re iPhone, tinotarisira kuti iwe uteedzere maitiro atatsanangura kuitira kuti kuzvimiririra kweApple foni kudzokere kune zvakajairwa tsika uye nekudaro kutora mukana uzere kugona kwebhatiri. Kana yasvika kumagumo ehupenyu hwayo hunobatsira uye iyo calibration isingashande, inogona kunge iri nguva yekutenga kutsiva bhatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Chengetedza iPhone Bhatiri
Ini ndinobva kuandroid, ndakatenga iyo iphone 1 vhiki yapfuura
asi ini ndakanzwisisa kuti kuburitsa kupfuura 15% lithiamu mabhatiri kwaive kwakaipa mukufamba kwenguva
Pindura kuna eoi
Ndicho chinhu chisina musoro zvakanyanya chandati ndambonzwa.
Hazvina musoro, mumhando iyi yemabhatiri zvinokurudzirwa kuti usazvipedza zvachose kazhinji.
Mune yako link imwechete inotaura chinhu chimwe chete icho iyi nhau XD VERENGA ZVAKANAKA kuti iwe unofanirwa kuiregedza uye wozoisa mutoro zvachose kuti iite calibrate uye kwete kugara uchizviita !! -_- '
Kakawanda sei bhatiri calibration inofanira kuitwa?
Zviripachena kuti iwe unongofamba nezve fashoni
Zvinosuruvarisa kuti nekufamba kwenguva kuzvimiririra kwe iphone kudonha zvakanyanya, ivo vanofanirwa kuwedzera iyo nguva zvakanyanya mune inotevera
kuti unoibhadharisa maawa matatu ega ega?
Kuzvimiririra kwebhatiri rerunhare uye handitaure kuti iPhone kana isiri foni mune zvese ndeyekuti mushure memakore 2-3 iwe unotanga kuona kudzikira uye mumakore 4-5 ndipo bhatiri parinogona kutanga kukuvadza magetsi kudzima kamwe kamwe kana yekupedzisira 30min bhatiri hupenyu. Kana mukati memakore asingasviki maviri iwe wakacherekedza kuti yakanyanyisa kuipa kupfuura nakare, ndeyekuti pamwe urikushandisa zvakawandisa. Nekuti kana ndichitaura nezve 2-2 makore ndinoreva kubhadharisa pazuva, kana iwe ukaita zvakawanda zvakajairika kuti ideredzwe nekuti kana ndisiri kukanganisa bhatiri rine chibharo chemazana mazana masere kana zvishoma.
Ndakamirira kuti iPhone yangu idzime asi… Inofanirwa kudzima zvachose? Ndokunge, mushure mekupedza iwo 6-7 maawa ekuzorora nefoni yakaburitswa kuchine bhatiri muiyo iPhone iyo inoratidzwa neiyo icon yebhatiri rakaburitswa pane iyo iPhone skrini, ndinofanira kumirira kuti inyangarike kubva pachiratidziri bhatiri icon? Kana kungo pedza iwo maawa matanhatu zvaringana?
Kana iphone yadzimwa nebhatiri, HAPANA CHINOBUDA PANO pachiratidziri, kubva ipapo chisiye maawa matanhatu nemasere ...
Beto Morales akadaro
Iwe unofanirwa kumirira kuti yako iPhone idzime nekuda kwekushaya bhatiri, kana izvi zvaitika, iwe unofanirwa kuzvisiya zvakadaro kwemaawa matanhatu (paMac, 6 zvakaringana) kunyanya husiku kuitira kuti utore mukana wehusiku hwako uye kurara zvakanaka kanokwana kamwe chete pamwedzi hehe, zuva rinotevera mushure menguva ino yaitika, unoenda nayo kubasa kana kuESC, woisanganisa kuAAC woisiya ichichaja kweanenge mamwe maawa matanhatu, (zvinofungidzirwa kuti unofanira kuenda yakabatana kwemamwe maawa maviri mushure mekushandurwa kwechiratidzo ichiita 5% asi imwezve nguva hapana chinoitika). Zvinokurudzirwa kuti mushure mekuyera iwe uiregedze ichidzokere ku6%, inodzima, mirira 100 hr wozoitazve uye wozopa iyo "yakajairika" mashandisiro aunopa iwe. Kune izvo iwe zvaunoda zvakanyanya, tarisa muchikamu chekutsigira, muApple portal. Kwaziso ndinovimba ndakubatsira.
Pindura Beto Morales
Ndine kusahadzika kumwechete, nekuti kana zvangozvidzima, kana ndikadzvanya bhatani rekiyi, ndinowana bhatani icon netambo. Muchokwadi, imwe yenguva ndakambo batidza foni, ndokumbira pini ndokuidzima zvakare.
Mushure memaawa angangoita makumi maviri nemana ekuenda, yangu iphone 24 inoenderera ichiratidza iyo yepasi bhatiri skrini, ini handizive kana kumirira zvakare, ndiyo nhamba yangu huru ... Zvinotora nguva yakareba sei kudzima zvachose chingave chiratidzo chakanaka? Iyo yakakwira inogara ndeye 4h 4min approx….
Pindura kuna florencio
Ndinoita Hard Reset ndichienderera mberi uye bastard anoenderera mberi kuratidza anofara madiki skrini yebhatiri rakaburitswa, ino yatove mosque ... bhatiri iri hariperi, handisi kunzwisisa kuti yako yapera sei muma6 kana masere maawa .. .
Zvinoitika ndezvekuti iyo iPhone 4 haina zviwanikwa zvakawanda seiyo iPhone 4s kana 5, uye ndosaka bhatiri iri rakasimba, muapuro rimwe chete kana iwe ukaritenga vanokuudza kuti iyo 4 inogara kwenguva refu bhatiri kupfuura zvimwe zvekushandisa uye zviwanikwa zvinoshandisa zvinotevera iphone zvinoda bhatiri kushandiswa
Ini ndinozviita nguva nenguva uye chokwadi ndechekuti inoratidza zvakanyanya munguva
Dambudziko nderekuti kusiya nharembozha kwemaawa masere chinhu chisingaite, ndinochida pa8 × 24
6 kana 8 maawa ekuzorora, maawa matanhatu kana masere kuchaja maawa gumi nemaviri kana gumi nematanhatu ndisina kushandisa iphone yangu (ndinowanzo shandisa 6/8… uhmmm… ndichafunga nezvazvo
Pindura kuna adal.javierxx
Yakave nguva yakareba kubvira parudzi rwemabhatiri enhare ASI akakurudzirwa kuaburitsa zvachose ... zvinoderedza kana hupenyu hunobatsira uchiita izvo ... pamwe zvingave zvakanaka kuti uwane zvishoma usati wanyora zvisina maturo ... isu ramba uchirarama munguva yepamberi yemabhatiri ...
kune maapplication ekuadzikamisa iwo pasina kuita iyi nzira yakakodzera nguva yenokia 3310 ...
Saver yebheteri yakanaka kwazvo yemahara app inoita mutoro calibration
Pindura kuna erer
Dhongi? Unozviita kamwe chete pamwedzi?
Mhedzisiro yacho yakanaka
Burradas ndizvo zvauri kutaura, ndizvo chaizvo zvakapesana. Kwenguva yakareba, mabhatiri haana iyo yekumusoro mhedzisiro yavaive nayo uye inogara kwenguva refu neyekugadzirisa kushandiswa nguva nenguva.
Haisi nyaya ye "memory athari", chinhu chinonzi kudzika kwebhatiri kudzika. Mabhatiri ese ane mwero wekuti kana ukaburitsa kupfuura ipapo, urikukuvadza bhatiri.
Iwe uri kuvhiringidza iyo "memory athari" nezviri calibration, izvo zvakasiyana zvinhu.
Iye / iye akataura rondedzero @. lol
Tarisa kune Wikipedia inofamba:
Avhareji yenguva: zvinoenderana nemutoro wenhumbi dzavanochengeta,
zvisinei nekushandisa kwayo. Ivo vane hupenyu hunobatsira hwemakore matatu kana kupfuura
kana akachengetwa pa40% yemutoro wavo wakanyanya (chaizvo, chero
bhatiri, zvisinei nehunyanzvi, kana yakachengetwa pasina mubhadharo
zvinodzikira. Ingo rangarira iyo sulfation maitiro akaitika
mune yekare zinc-kabhatiri mabhatiri pavakachengetwa
Kana iwe uchizoiverenga panguva yakanakira iwe, zvinoreva kuti kana ukavasiya kwenguva yakareba vasina kushandisa nemutoro wepasi pe40% vanogona kukuvara.
Kudzokorora imwe «erer»: «pamwe zvingave zvakanaka kuti uzvizivise iwe zvishoma usati wanyora izvi zvisina maturo»
Kana iwe ukatarisa chikamu cheApple chekutsigira, iwe unowana zvinyorwa pavanokurudzira maitiro aya kanenge kamwe pamwedzi, kungave kwe iPhone, Mac, Ipad, nezvimwe. Zvingave zvakafanira kuti uzvizivise iwe zvishoma usati wavimbisa chimwe chinhu.
Saka zvakanakisa kuvimba izvo zvinotaurwa neApp? Uye kana iyo App ikakuudza kuti iwe unofanirwa kuita zvavanotaura pamusoro saka waizozviteerera here?
Kupusa kuziva, bhatiri re5 rinogara kwenguva yakareba sei? Use of whatsapp and normal Fb, usina kufona zuva rese.
Jose Bolado Guerrero chigaro chemufananidzo akadaro
Kubva pandakatenga iyo iPhone 5s inondigarisa zuva rese .. Nekushandisa whatsapp .. Facebook .. Mitambo .. Etc I calculate kuti every half hour ndiri kuibata.
Pindura kuna Jose Bolado Guerrero
Totally agree, ndaive ndakatsamwa kwazvo nekuti senguva dzose maApple anongokwidza mAh mumabhatiri avo zvishoma kweanopfuura makore anopfuura mumidziyo yavo, sezvavakaita kubva pa4 kusvika pa4S uye zvichiteerana kubva pa5 kusvika pa5S. Nekudaro, ini ndinonzwa kuti kunyangwe chiri chokwadi kuti maApple akachena chimbadzo nemidziyo yavo mizhinji, panguva ino vaita basa risinga tsanangurike neIOS 7 uye iyo itsva 64-bit processor, ndakagutsikana neiyi itsva iPhone 5S iyo ikozvino Kana iwe unoona mutsauko pakushandiswa kwezviwanikwa, uchiita kuti bhatiri rigare rakazara kwezuva rese nekushandisa zvine mwero uye kanokwana maawa gumi nemaviri nekushandisa zvakanyanya +12.
Kana iri bhatiri calibration, ihama ... Asi kutaura nenzira yakajairika, yakandishandira, chete kuti kana bhatiri rave rinenge gore nehafu, izvi hazvicharatidzika kunge zvinoshanda, asi rangarira izvo gore nehafu kana maviri akanakisa yatove nguva yekuchenjera kutsiva bhatiri mune mbozhanhare ratakashandisa zvakanyanya muchiitiko zvekuti isu hatisati tichida kuchitsiva kana tisina zviwanikwa zvekuzviita.
Ini ndakatengawo iPhone 5s uye ndichinyatsoipa iko kushandiswa kwakafanana neyako, haitombosvika kwandiri masikati
Zvakanaka, chero iwe unofanirwa kutarisa masetingi ... akadai otomatiki meseji ... zviziviso zvetsamba kana mitambo kana ukasazvishandisa, zvimise pamwe nenzvimbo yezvinhu zvese zvausingashandise zvadzimwa uye pamusoro pazvo zvese iyo multitasking app ... nekuti maminetsi gumi ekutanga anogara kumashure uye anodya uye kana kugadzirisa mamwe marongero zvishoma hazvigadzirise .. tora iende kuapuro nekuti mamwe akaremara .. ona kana risiri peji rino: http://m.applesfera.com/iphone/apple-confirma-problemas-con-la-bateria-de-algunos-iphone-5s-a-causa-de-un-error-de-fabricacion
Sebastian Vargas chinobata mufananidzo akadaro
Zvakanaka, ndine mashanu uye ndakaidzorera (chete kumisikidzwa) uye chimwe chinhu chandakaona kuti chakaburitsa bhatiri (rakagara maawa manomwe) Siri anoiburitsa zvakanyanya kana achidzosera matanho ekumisikidza kubva kuma5 kusvika kumaawa gumi nemana achiipa ichienderera shandisa kutamba, kuteerera mimhanzi, whatsapp, facebook, nezvimwe.
Pindura Sebastian Vargas
Ini handiwanzo kurodha kumusoro uye handisi kuisiya pa "0", ndiri kuchaja zvishoma kana zvakawanda zvichienderana nekudikanwa kana mashandisirwo andinozoitwa. Zvangu zvirevo ndezvi:
Shandisa: 21 maawa, 52 maminetsi.
Pakuzorora: mazuva matatu, maawa maviri.
Iwe unongoishandisa chete kuemail? Nekuti ini ndinoshandisa 21pm neyakajairwa kushandiswa kweWhatsApp, Twitter uye FB, zvakajairika kusimuka kusvika parizvino.
Izwi revanhu ... akadaro
Saka akawanda madhimoni uye madhesiki ndakatenga bhatiri rekunze uye nyaya yakatarwa ...
Kupindura La Voz Del Pueblo ...
Ini ndaigara ndichifunga kuti chakanakira kumirira kuti foni idzime nekuda kwemutengo wakaderera mazuva ese wozochaja kusvika ku100% wozvimisa mushure mehafu yeawa. Ndozvandinogara ndichiita, uye ini handina hupenyu hwakanaka hwebhatiri, inosvika pamaawa gumi nemaviri. Ini ndinofunga kuti dambudziko rinouya nekuti pese pandinochaja ndinoishandisa uye bhatiri rinopisa, izvi zvinoita kuti zvive zvakaipa kwazvo, asi kazhinji ndinofanira kuishandisa.
Chii chiri chechokwadi ndechekuti kusiya bhatiri kuchaja husiku hwese kwakaipa kwariri nekuti rakawandisa, saka chakanakira kuibvisa mushure mehafu yeawa yekuchaja kwakazara. Kana iwe wakamboona, mune mazhinji mafoni eApple inokuudza kuti ubatanidze kamwe wakachajiwa kuti utore bhatiri.
Ini ndinofunga ndarasika ... asi pano tiri kutaura nezve iPhone kana Android? Kwemakore, zvese iPhone neMac zvine tekinoroji yekudzivirira mabhatiri uye kunyangwe iwe ukaisiya ichichaja kwemazuva maviri ese, hapana chinoitika nekuti iyo iPhone inodzivirira bhatiri.
Kuti nhare inopisa iwe uchiishandisa ndicho chinhu chinowanzoitika pasi rose, vamwe vachakutaurira kuti hachipisi uye vamwe vachati chakatsva, zvese kutenda asi izvo zviri pachena ndezvekuti kunyange ichitakura a imwe nhamba yemachips iyo iri kushanda uye kana iwe ukaishandisa, iwo machipisi anowanda, saka zvakajairika kuti ipise sezvo iri kushanda zvakapetwa zvakapetwa.
Chekupedzisira, fara !! Chii chinonzi kuimisa pa30m kubva mubhadharo izere? Enda enda unonwa kofi kana chinyararire chinyararire kuti hapana chichaitika kune yako iPhone.
Ini ndakaisa iyo muenzaniso we android nekuti ini ndaifunga kuti mune ese maserura mafoni akaitika sezvo iri iwoyo mhando mabhatiri.
Iniwo handisi kumirira kuti ndigumure kana mutoro wapera. Kuma 7 masikati inenge yatopera, saka ndinoibatanidza uye ndisati ndarara yakatozadzwa uye ndinoibvisa, zvinoitika. Uye hongu, zvakajairika kuti ipise kana ndikaishandisa ndichichaja, asi izvo zvakashata kubhatiri.
Ndiri kufunga nezvekutenga iwo mashanu, iyo bhatiri yakati kurei, asi nekuda kweM5 koprocessor inoita kunge inogara kwenguva refu.
Zvakanaka, ndanga ndiine yangu iPhone 4GS kwemakore mana uye ini handina kana kudzikamisa bhatiri. Uye zvinogara sezuva rekutanga! Chikamu chega chakandipa dambudziko yaive kamera, iyo yandakatenga paEbay nemidziyo yekuichinja! Inoshanda sedumwa! 😄
(Kamera yako yawakauya nayo kubva kufekitori yakanga yakanganisika uye ndakaitsiva neimwe yandakatenga paEbay) izvozvi zvinoshamisa uye zvese zviri kushanda! 😄
Uhhhh ne iPhone yangu 4 inoenda kubva pa100% kuenda 99% mumasekondi makumi matatu uye inodzima ne30% xD… handizive, asi mushure mekuverenga chinyorwa, chimwe chinhu chinondiudza kuti chinoda kuenzaniswa haha, ndatenda zvikuru Gonzalo !!
Pindura kune aaaaalex0180
Idzi inhema dzakasviba, usatombozama, kutambisa nguva varume.
Ndakaigadzira kubva nezuro kusvika nhasi (chaizvo sezvazvaive zvakanyorwa pamusoro, maawa chaiwo) uye bhatiri rine maitiro akafanana.
Iyo jira gonzalo yekugara seizvi nevanhu.
Ini ndinokukoka kuti uone kuti, kunze kwangu, zvinokurudzirwawo naApple pachayo pawebhusaiti yayo
Vanogona kuzvikurudzira, asi hazvishande! Zvirinani kwandiri. 3 iPhones dzakasiyana.
Handikwanisi kunyatsozviona ... Rudzi rwemabhatiri anotakurwa nenharembozha nhasi ndiLiPo (Lithium Polymers) uye chaizvo chimwe chezvinhu zvinovabata zvakanyanya kuburitsa kwakadzika kwebhakitiriya, saka mumaonero angu rudzi urwu yezviito zvinokuvadza kupfuura kunaka ... (chenjera, iwo maonero anobva pane izvo vagadziri vanowanzo kuratidza).
Zviripachena, ivo vanowanzo taura kuti kune 1 cell (1S) mabhatiri avo ezita voltage ndeye 3,7V, vachikurudzira kuti isaburitse pazasi pe3V.
“Sero rega rega rine mwero wemagetsi we3,7 V, huwandu hwemagetsi 4,2 uye hushoma 3,0. Iyo yekupedzisira inofanirwa kunge ichinyatsoremekedzwa sezvo bhatiri racho rakagadziriswa zvisingaite pane voltages isingasviki matatu volts »
Mumwe nemumwe kuti aite zvinonyanya kumubatsira. Ini pachangu ndinofunga kuti hazvindipe chero mukana kubvisa zvachose bhatiri kubva parunhare.
Thanks Gonzalo, inoshanda chaizvo!
Ndisati ndadzora yangu iPhone 5 neIOS 7, yaizovhara pasi bhatiri parakandiratidza 3%, 5%, 2%. Muvhiki ino takachenesa iPhones kumba uye nhasi, yangu iPhone 5 yakadzimwa iine 16% bhatiri. Munguva kubva payakapedzisira kubhadhariswa, isati yaenzana, yakandiratidza maawa manomwe nemaminetsi makumi mana nematanhatu. Nhasi, payakadzima, yakaratidza maawa mashanu maminetsi makumi mana nemana. Saka kudivi rangu, izvi hazvishande kana kuti hazvina kunyatsotsanangurwa. Isu tinoteedzera nhanho sezvakaratidzwa muchinyorwa. Zvino, bhatiri rangu re iPhone rinogara zvishoma !!!!! Kwaziso.
Ivo havazombozviona! Izvo ndezve kushambadzira uye capitalism.
Ini ndinonyatsofunga zvakadzama kuti makambani ave nenguva yakareba achikwanisa kugadzira matekinoroji anozadzisa zvese izvi zvinodiwa, asi havazviitire chokwadi chakareruka chekuti sezvavanenge vachivandudza zvishoma, vanozove nechikonzero nei mushandisi achida kutsiva mutengi wekare. zvemagetsi, zveiyi nyowani izvo zvino zvinotora nguva yakati rebei kubhatiri kana zvinopa kuita kuri nani zvichienzaniswa neiyo yapfuura.
Mune maonero angu, ndizvo zvazviri. Ndinokupai muenzaniso wemajini emota. Kuverenga iwe uchaona kuti kwenguva yakareba yakaferefetwa maitiro ekugadzira injini dzinoshanda nemazvo nemvura kana simba remagetsi semafuta; Hazvingave zvisinganzwisisike kuti pakanga paine zvimiro zvekare uye zvakaoneswa dhizaini yemotokari dzakakurumidza uye dzisingambofungidzike, asi izvi hazvitorerwe chikonzero chiri nyore uye chakatwasuka chekuti shamwari dzedu dziri muchikamu cheoiri dzinopera bhizimusi remafuta ... Saka, kwezvazvino chete Izvo zvasara kuti isu timirire ivo kuti vade kuzviita.
Shamwari, icho chinhu chekare, icho chaive chemabhatiri akagadzirwa nekadhimiamu, ikozvino matsva akagadzirwa neshumba, uye izvi hazvishande senge cadmium yekushandisa matanho aunoti
Yangu Foni 3 yakadzvanywa ini ndakaedza kuirodha nemachaja akasiyana efoni asi nanhasi hairove uye handizive zvekuita
Pindura kune kizzy
Ini ndanga ndichishandisa tekinoroji Samsung Android s4 iyo foni yakanaka kwazvo muchidimbu, iphone haina kana enzaniso, iyo yandakagadzira timu iyi, ndine hunyanzvi hwakawanda sezvo iine humwe hunyengeri uhwo kwandiri hwakachinja runopfuura chiuru chefoni seti, mazano ese ane zvibereko haana enzaniso Izvo zvinodikanwa kuti ubvumire kubva kuVenezuela kune nyika yese kana yenzvimbo ino yaunoda ivo viva chango viva zarabanda
Pindura kuna Osmer
Martin Bogado akadaro
Mhoroi, ndine iPhone 5c yandakatenga masvondo maviri apfuura, ndakashamisika kuti nharembozha yaive iripo pandakavhura bhokisi, riine isingasviki 2% bhatiri, uye zvakanaka ndakasvika kumba ndokuchaja kusvika zana uye ndakadimbura (Handizive kana ndakaita nhanho iyi nemazvo), zvakanaka pasvondo ndakazoverenga izvi ndikazviita, ndakasiya husiku hwese ndisina kuburitswa (20: 100-00: 30) uye ndakaibhadharisa kubva 07 kusvika 00, zvakanaka mushure meizvozvo bhatiri rangu rakawedzera nguva yaro, asi ikozvino ndine dambudziko rekuti bhatiri rangu rinodzika nekukurumidza, zvingave zvinokurudzirwa kuti zvidzokororwe pamberi pemwedzi 7 mushure mekutanga calibration?
Pindura Martin Bogado
Kuti uone ichi chinyorwa hachisi maonero, irwo ruzivo, ivo vanongoita izvo zvinokurudzirwa neapuro pane yayo yepamutemo peji.
Ivan Uh akadaro
Usarwa nePhones; rudo nerugare. (:
Pindura kuna Iván Uh
Imwe nguva yapfuura ndakaita izvi uye handizive kana zvaive nekuda kweizvi asi ikozvino zvadzima painobuda, pa17% 20% 5%, ndataura neApple musiyano nezviuru bvunzo uye pamwe ndakavaudza zvekuyera uye zvavakandiudza ndezvekuti calibrate mirira kuti idzime zvachose uye mune iyo mamiriro kuti hairegi ichitenderera (iyo isina bhatiri inobuda) mirira maminetsi mashanu uye uzere zvizere. Hapana chekumirira 5 kana maawa masere ayo ari emac laptops anounza bhatiri rinobviswa.
Muchokwadi, hapana kwese mumanyowani uye yepamutemo apuro rubatsiro kunouya kubva pakuenzanisa iyo iphone bhatiri chete iyo yemalaptop ane bvisika bhatiri
Yangu iphone 4 yanga isina hupenyu hwebhatiri anodarika maawa masere. Yakatanga mushure mekuvandudza kune iOS 8. Ini ndanga ndachinja chiuru masetingi uye hapana. Yakazara yekuti pakupedzisira ini ndakagadzirisa dambudziko nenzira yakapusa uye kana uchida. Disassemble iphone yangu kuti ishandure kuorenji. Zvinoitika kuti mushure mekubvisa bhatiri kweanosvika makumi mana min uye kubatanidzazve. Yakave yakagadzirwazve patsva uye inotora rinopfuura zuva.
stephanie siado akadaro
Mhoroi, ndanga ndichienzanisa yangu iPhone 5, ndakairegedza, ndomirira maawa matanhatu ndoibatanidza.Mambakwedza, maawa matanhatu anga apfuura uye haina kubatidza, ndaizoibvisa kare here? Ndeipi mhinduro yaungandipe nekuti ini ndaibatanidza kune itunes ini ndaedza kuiseta uye hapana kana chinhu ndapota ndisiye mhinduro.
Pindura kuna stephanie siado
Zvakanaka, kana iwe uchinzwa kuti mhandara iri kutaura newe, unogona kuyedza kuitazve.
Unganidza sero yako kuLap
Dhinda uye ubatisise Simba uye Kumba mabhatani panguva imwe chete kwemasekondi gumi
Ramba uchidzvanya maseti mashanu pamwe neyekutanga, uchiburitsa chete kudzima
Iyo USB tambo ikoni inofanira kuoneka uye iwe uchaitangisa iyo
Kana izvi zvangoitwa, unogona kuzvifananidza ne iTunes yako kuitira kuti idzorerwe neKopi yekupedzisira kopi
Pindura kuna @j_silva_l
Ndiani angandibatsire kushandura bhatiri rei iphone 4s uye zvino zvaari kuda kupinda muharare, anongoramba akatarisa asi hapana
Chikunguru zvinowanzoitika kuti kana iwe ukachinja bhatiri wabvisa wifi-3G kanyanga. Kana yakafanana neiyo iyo iPhone 4, inosanganisirwa mune yepasi mutauri. Tarisa iyo antenna tambo yekubatanidza. Uye kuti simbi mutauri vanobata vanobatika vakavakirwa nechepasi pechidzitiro uye kwete pamusoro.
Kana zviri zvekufananidza kana kuenzanisa bhatiri, ivo vari kutaura nezve mafambiro anosvika kumaawa matanhatu. Ndinoona hupenzi chaihwo. Kubvisa zvipenga zviviri kubva pabutiro rekuseri uye sikuruwa kubva kubhatani yekubatanidza. Unodambura bhatiri. Dhinda bhatani remagetsi kwemaminitsi mashanu uye wotamisa zvakare bhatiri uye uvhare iphone. Zvinotora gumi min. Uye iyo bhatiri ruzivo rwunovandudzwa.
Mhoro iphoneros, nenyaya yebhatiri ndinokuudza kuti mukushandisa kwakanyanya kwei iphone yangu 5 inotora kubva pa4 kusvika kumaawa matanhatu (KUTamba mitambo, kumeso, WECHAT, KUTEERERA KUMIMI, ETC) izvozvi pane kudzora bhatiri rese uye kutarisa ese mashanu maminitsi kana tikatambira meseji ini ndinokurudzira kuti unakidzwe nehupenyu zvakanyanya uye usazive kwazvo foni yako kuti iwe uone shanduko huru mukuzvimirira kwe iphone yako
Carmen del Pilar maruva akadaro
Ndine iPhone 4 uye vakaitora kuchikoro uye vanoidzosera kwandiri pakupera kwetemu inova nguva inenge vhiki mbiri dzaGumiguru uye ndakaona kuti iPhone haigone kubhadharisa kweinopfuura mwedzi nekuti zvikasadaro bhatiri inotanga kuzvimba kana chimwe chinhu. Ndinoda kuziva kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Ndatenda
Pindura kuna Carmen del Pilar maruva
Iyo iphone haina "kudzima chete nekuti inofunga yega kuti haina bhatiri rakasara" uye yobva yaonekana, ndokudzima ... Zvinoitika ndezvekuti chiratidzo chebhatiri hachikwanise kuratidza chaji chaiyo, ndosaka dzimwe nguva bhatiri re1% rinotigarisa kwenguva yakareba kupfuura dai raiyerwa, sezvo iyo iPhone yaitenda kuti paive nebhatiri shoma, asi haidzime yega ... joe, ndeye moto kuti dai yaive nebhatiri rakasara, haina kuzvidzima yega, inongoratidzira zvisirizvo bhatiri, asi yaizogara zvakafanana.
Kukanganisa kukuru izvo muchinyorwa chino
Jose Antonio Gomez akadaro
Zvakanaka, ini ndaisaziva kuti nekuburitsa zvachose iyo iPhone uye nekuchaja zvekare, bhatiri rakagadziriswa. zvinonakidza izvozvi ndichazviita kuti nditarise !!!
Pindura kuna jose antonio gómez
Ndakazviita sezvakaratidzirwa uye mhedzisiro, kwandiri, yanga iri yakanaka.
Ini ndinoronga kutevedzera iyo "system."
Ini ndatoenzanisa iPhone yangu 4 uye ndinoona kuti kana bhatiri rikatora nguva yakati rebei asi mubvunzo wangu ndouyu: ndinoramba ndichichaja yangu yakajairwa iPhone sepakutanga? Ndinozviita kwemaawa maviri kusvika maviri nehafu.
Mhoroi, yangu iphone 5s painosvika pa5% inodzima uye ndayienzanisa kaviri kare 😭😭😭
Edza nhanho mune ino posvo uye hapana, iyo bhatiri inoramba ichimhanya nekukurumidza, inogara ingangoita maminetsi gumi nematatu kubva pa13% kusvika 100% uye ndachinja bhatiri idzva asi harigare zvachose, ndine shamwari vane iPhone 99s uye ivo Zvinotora zuva rese vachishandisa WhatsApp, Facebook uye kuteerera mimhanzi, mumwe munhu andiudze zvekuita, ndapererwa.
Mhoro tarisa zvinoita kwandiri kwemaawa masere uye Muna 1 min ndanga ndatopedza zvese uye ini handina kumbozvienzanisa kana kumisikidzwa kana chero chimwe chinhu, kana ndikaita izvozvo, zvinoita here kuti zvigadziriswe? Nekuti bhatiri randiinaro nderetsva, pa5% rinodzima uye dzimwe nguva rinovhura uye riine 3% bhatiri, ndoita sei? batsira !!!
Pindura kuna Alejo
efren torres s akadaro
Manheru akanaka, kurudziro inoreva kureba kwebhatiri uye zvimwe zvakaita sekuyera bhatiri uye zvinhu zvakawanda zvakakosha kuti imwe x kusazivisa inopa zvisirizvo foni iyi ruzivo rwakandishandira zvakanyanya, ndatenda x zvese
Pindura kuna efren torres s
JOEL ENRIQUE CALDERA akadaro
Dzosera iyo iPhone kune inogadzira nyika uye usaite kudzoreredza kuburikidza iTunes, uye dhawunirodha iwo mafomu rimwe nerimwe kuti uone kuti nderipi rinogadzira kutadza.
Ndinovimba mhinduro iyi inokubatsira.
Pindura JOEL ENRIQUE CALDERA
cam that akadaro
Mhoroi, ndanga ndichida kuziva kana muchikwanisa kundibatsira, zvinoitika ndezvekuti ini ndine iPhone 5c uye haina kubhadharisa zvakakwana bhatiri, ndaenda kashanu kune technical technical iyo inondiudza kuti haina dambudziko. Chinhu ndechekuti ini ndinochaja uye inongosvika 52% bhatiri rakachaji uyezve harifambe, rinotanga kuburitsa. Handizive kuti nei izvi zviri kuitika uye zvakandityisa sezvo ndisina mari yeimwe nharembozha.
Pindura kuna cam
Dambudziko iri rinoitika kana iwe ukasashandisa yekutanga kana yakasimbiswa Apple tambo kubhadharisa chishandiso. Zvimwe zvinokutendera kuti ubhadhare bhatiri zvishoma asi pakupedzisira zvinomira. Edza yakasimbiswa kana yekutanga uye iwe uchaona sekunge inobhadharisa 100%.
Paolo Cozzi akadaro
Dambudziko rangu nderekuti bhatani remagetsi harishande, saka ndingaite sei iro reset? Bhatiri rangu harisi pasi pegore uye nderepamutemo kubva kuApple asi rinodzima kana riine 25% saka ndinoda kuidzora kuti ndione kuti iri sei. Batsira nebhatani ndapota
Pindura Paolo Cozzi
Pamusoroi, ndinochaja iPhone yangu nekuti yadzima zvachose uye kubva ipapo ndinoibatanidza uye ndinobhadharisa 100% x muenzaniso izvozvi kubva ku12 husiku kusvika pa3 mangwanani ini ndinobhadharisa 100% Ini ndinoibvisa uye zvinoitika mumaminetsi mashoma 10 -15 x Ndakaona zvakawanda kubva pa100 kusvika 99; zviri normal here?
Ndoirega ichidzima zvachose?
Kana kuti ndinofanira kubhadharisa isati yadzima?
Izvozvi kunyora ichi chirevo kutove ne97%; Dhawunirodha chirongwa cheBattery Hupenyu zvinoenderana nekuona chinzvimbo chebhatiri uye ini ndinowana 'Zvakanaka' ndine zvingangoita 118 mhosva maererano neapp uye ndakaitenga muna Zvita 21, 2016!
Ndiudze zvekuita kana zvakanaka kana iwe uchifunga kuti ndinofanira kuita chimwe chinhu? Enda chero zano rekuvandudza mashandisiro ebhatiri!?
Ndingazvifarire vakomana, iri iPhone 6 Plus!
Uyezve, ndichichishandisa zvakajairika, chinondibata kusvika nhasi, Chishanu manheru, uye panguva imwechete ndinochibhadharisa kana ndikaishandisa yakawanda, ndatove nemapapiro 7, ndiri kuchachaja zvakare kuti kana ndisina kuibata , rega ichachaje yega isina network sezvo painotangazve pakungoibatanidza nemagetsi saka ndinoisiya 🙂
Varume ... zvinogona kudaro kana bhatiri rikadururwa kusvika zero, ini ndinoriisa kuchaja uye mushure mechinguva rinotendeuka roga
Saka handikwanise kuisiya ichibhadharisa
pane imwe nzira yekugadzirisa izvo ??
Kana zvirizvo, iyo iPhone inotendeuka chete kana zvichitora bhatiri rakaringana kushanda. Asi hapana chinoitika ita zvarinotaura muposvo nekuti rinoshanda rega rikwanise kuriramba uye ririchengetedze kwemaawa masere riise mufodhi mode risati radzimwa kuti ridzivise kuti parinoitazve rinobatana nenharembozha uye unoedzwa kuti upindure kuSMS, WhatsApp, twitters, mafoni, nezvimwe. Uye mushure memaawa masere waburitswa uye wadzimwa pa8%, unoivhara mumagetsi, uisiye ichibhadharisa kwemaawa masere uye usingaibata kana chero mamiriro ezvinhu kana kuti unononoka kudzikamisa bhatiri; Ndokusaka zvirinani kuti uzviise mumhepo yekubhururuka kare kuitira kuti usatambire chero chinhu zvachose, kana mafoni anogona kukanganisa mvumo. Ndakazviita sezvizvi sekutsanangura kwavo uye zvave zvemhando yepamusoro uye bhatiri parinotora mazuva angangoita maviri uye kana ndikasatamba kana ndine chiso rinosvika kwandiri mushure memazuva matatu sepandakaritenga. Nenzira, kana nharembozha yatora muripo pakati pe8% ne0%, inozotanga-yega, usabhadhare iyo, ndosaka iwe ukaisa iyo ndege mamiriro.
Ricardo Quintana M. akadaro
Mhoro iphoner's, mumirairo yekuketa bhatiri haritaure kuti unofanirwa kuburitsa bhatiri kusvikira nhare yadzimwa kana kusvika iyo usb icon uye isina bhatiri yamira kubuda?
Pindura Ricardo Quintana M.
Mhoroi vakomana nekutenda kune iyo post ini ndakazviita uye zvinobva zvaratidza kuti ichokwadi uye zvinoshanda. Ndanga ndichivhura uye paFacebook kwenguva yakareba uye haina kudonha kubva ku100% apo kumberi mune yakaderera pane jongwe rakarira yaive nayo pasi pe90%.
Ndatenda zvikuru nezvazvo, zvakandishandira kutsamwa chaiko.
Nezuro ndakachinja bhatiri muphone yangu 5s ndikaona kuti harina kumbogara zvachose. Kutsvaga ruzivo ini ndauya kune ino foramu, saka ndiri kuita ichi calibration. Chinhu ndechekuti, handina chokwadi kana ndakakwanisa kudhonza bhatiri, nekuti rinobva pa28% rakananga kuvhara (izvo zvaive zvakafanana nezvakaitika nebhatiri rekare). Ipapo ini ndinoedza kuyibatidza uye inobvunza kuchaja. Mushure mechinguva inonditendera kuibatidza uye pandinovhura app inoidzima zvakare. Ini ndinongoisiya yakadaro ndokumirira maawa masere kubva zvino? Ndatenda
Iyo itsva iPhone 5se ichave neA9 / M9 machipisi, Siri yekusingaperi uye 16 / 64Gb
Auto Indasitiri Inogadzirisa: "Apple Iri Kuita Basa Rakanaka Nayo Apple Mota"